Dhiirrigelinta Dhacdooyinka Xaashiyaha waraaqaha ayaa ah aruurinta waraaqaha la sameeyay intii lagu jiray 2013 iyo 2015. Mashruucan wuxuu ku lug leeyahay adeegsiga tijaabada ee joornaalka loo maro isticmaalka khadadka, qaababka iyo aragtida isometri ee dhalisa khibrad gaar ah oo fikradeed. Mid kasta oo ka mid ah sawir-gacmeedyadan ayaa matalaya caqabad ku ah inay la xiriiraan isticmaalka keliya ee nooca. 1. Boostada si loogu dabaaldego Sanadguurada 40aad ee Felix Beltran. 2. Boostada si loogu dabaaldego sannad-guurada 25-aad ee Machadka Gestalt. 3. Boostada si looga mudaaharaado maqnaanshaha 43 arday ee Mexico. 4. Boostada loogu talagalay shirka naqshadeynta 'Passion & Design V.'
Farshaxanka Xiisaha Leh Ee Xiisaha Leh
Isniin 26 Bisha Afraad 2021
Farshaxanka Xiisaha Leh Ee Xiisaha Leh Naqshadeeyayaasha NYC iyo farshaxanka farshaxanka Christopher Ross ee ururinta farshaxanka qaaliga ah ee dabiiciga ah Xannaanada xoolaha ayaa ah taxane xayawaanno dhiirigelin leh, qaybo xaddidan oo xaddidan oo uu farshaxanku laftiisu ka kooban yahay oo ay ka soo qaateen lacag qurux badan, 24-karat dahab iyo quraarad Bohemian. Si taxaddar leh u garaacaya xuduudaha u dhexeeya farshaxanka, qurxinta, haute couture iyo naqshadeynta raaxada, suumanka sculptural-ka ah waxay u sameyaan qaybo gaar ah, qoraallo kiciya oo keena fikirka farshaxanka xayawaan jirka. Awood siinta, indhaha u qaadashada iyo asalka, gogo 'qoraallada wakhtiyada aan xad lahayn ayaa ah sahaminta dareenka xayawaan dheddig ah ee qaab farshaxanimo ah.
Isbedelka Dijitaalka Ah
Isbedelka Dijitaalka Ah Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee moodada timaha ayaa ku saabsan inay qaadaan tallaabo geesinimo leh ku-habboonaanta dhijitaalka ah. Dib-u-kobcinta dhibcaha dhibcaha ee loo yaqaan 'dot dot' iyo jaangooyooyinka 'Tigi Color Copyright' waxaa lagu maareeyay isugeynta waxyaabaha ay ka kooban yihiin, oo ay abuureen farshaxan yahanada, ku lug lahaanshaha sawir qaadayaasha casriga ah iyo muujinta naqshadaha aan muuqan ee dhijitaalka ah. Farshaxan wanaagsan, laakiin farqiga u dhexeeya farqiga u dhexeeya farsamooyinka iyo farsamada. Ugu dambeyntiina ku hagidda Tigi iyada oo loo marayo tallaabo caafimaad qabta oo loo maro isbadal dhab ah oo digital ah laga bilaabo 0 illaa 100.
Wacyi Gelinta Iyo Ololaha Xayeysiinta
Sabti 24 Bisha Afraad 2021
Wacyi Gelinta Iyo Ololaha Xayeysiinta Maaddaama booska gaarka loo leeyahay ay noqon doonaan ilo qiimo badan mustaqbalka, baahida sii kordheysa ee qeexida iyo qaabeynta qolkan ayaa ah arrin muhiim ah da'da hadda jirta. O3JECT waxaa ka go'an soo saarista iyo xayeysiinta meel tuubada-cadeyntu u egtahay oo xusuusineysa mustaqbal aan la aqoon. Buug gacmeed gacmeed, ku lifaaqan iyo qaab dhismeed, oo lagu dhisay mabda 'Faraday Cage, wuxuu ka kooban yahay qaab dhismeedka muuqaalada qolka umuuqda utopian oo lagu xayeysiiyay naqshadeyn olole oo dhameystiran.
Jimco 23 Bisha Afraad 2021
Shayton Equilibrium Hypercar Axad 9 Bisha Shanaad
SATA | BIA - Blue Islands Açor Aqoonsiga Sumaddiisu Sabti 8 Bisha Shanaad
COOKOO Saacad Xiran Jimco 7 Bisha Shanaad
Dhiirrigelinta Dhacdooyinka Farshaxanka Xiisaha Leh Ee Xiisaha Leh Isbedelka Dijitaalka Ah Wacyi Gelinta Iyo Ololaha Xayeysiinta Mashruuca Qoraalku Aqoonsiga Shirkadu